Shirkadda BECO: Maskax, Muruq iyo Maal Midoobay oo Higsanaya Horumarka Korontada Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Shirkadda BECO: Maskax, Muruq iyo Maal Midoobay oo Higsanaya Horumarka Korontada Soomaaliya
Shirkadda BECO: Maskax, Muruq iyo Maal Midoobay oo Higsanaya Horumarka Korontada Soomaaliya
Agaaismaha Guud ee shirkadda BECO, Cabdulaahi Xusen Kaahiye
Shirkadda korontada ee BECO waxaa la aasaasay 5tii bishii May ee 2014. Waxa ay ka kooban tahay 3 shirkad oo mid kasta oo ka mid ah ay ka koobneyd shirkado yaryar oo isu tegay. Ujeeddada loo aasaasay ayaa waxa ay tahay in laga gudbo dhibaatooyin ballaaran oo dhanka korontada ah oo ka jiray magaalada Muqdisho, kuwaasoo haystay shirkadaha iyo macaamiishaba.
Si la isugu daro maamul, muruq iyo maskax, isla markaasna loo helo koronto tayeysan ayay ahayd ujeeddada ugu weyn ee loo aasaasay sida uu sheegay Maamulaha Howlaha Shirkadda Korontada ee BECO, Cawil Tooxow Khayre.
Mar la waydiiyay in BECO loo sameeyay in ay suuqa keligeed u harto ayuu arrintaas ku tilmaamay inay tahay fikrad khaldan oo aan sax ahayn. Sababtuna ay tahay in dhamaan shirkadihii yaryaraa inta ay midoobeen ay haddana hal shirkad wada noqdeen oo aysan jirin cid bannaanka la dhigay.
Koronto Raqiis Ah:
Cabdullaahi Xuseen Kaahiye oo ah Agaasimaha Guud ee Shirkadda Beco ayaa intaa raaciyay isaga oo beeninaya inay korontada qaali ka dhigeen marka ay midoobeen kaddib “Inta aanan midoobin ka hor korontada waxay ahayd $1.20 oo ah mid aad qaali u ah marka lala barbardhigo adduunka kale, mana jirin 24 saac koronta ah oo magaalada oo dhan gaarsiisan. Shirkadaha dhib ayay isku qabeen, dadkuna dhib ayuu ku qabay. Hase yeeshee midowga kaddib korontadii waxaan jabinay labo jeer oo waxaan haatan ka dhignay 0.70 ilaa 0.60 halkii Kiilo Watt.” Muddo sideed bil ah oo kaliya iyadoo jirta BECO ayay dhintay qiimaha korontada kala bar iyadoo aan weli keenin qalab cusub waana sii socon doontaa qiima dhimistaas si ay uga faa’iideystaan dadweynuhu haddii alle idmo.
Faa’iidooyinka Midowga Korontada:
Faa’idooyinka ay keeneen midowga shirkadihii yaryaraa ayaa waxaa ka mid ah in xaafad walba jidadkeeda la galiyay nalal, taasoo yareysay tuugadii ka faa’iideysan jirtay mugdiga. Waxa uu intaa ku daray Mudane Kaahiye in isbitaallada iyo masaajidda la siiyo koronto tayo leh aadna u jaban.
Cawil Tooxoow ayaa isaguna Xaqiiqa Times u sheegay waagii hore waxaa dhici jirtay in shirkadahu aysan gelin karin koronto meelaha qaar oo ay shirkadaha yaryar xudduudo kala lahaayeen, macaamiishuna aysan heli jirin koronto joogto ah oo tayo leh. Maanta sida ay doonaan ayay u heli karaan koronto aad u raqiisan oo ay marka biilka loo diro isaga bixin karaa telefoonkooda iyagoo aan imaanin xaafiisyada shirkadda ama aan safaf dheer u gelin waa horumar dhinaca teknolojiyada ah.
Xalane oo ka mid ah ganacsatada isticmaasha korontada BECO oo ka hadlayay isbeddelka qiimaha korontada iyo midowga shirkadaha ayaa yiri “dhibaato ayaa naga heysata korontada sicirkeeda oo sarreeya wali. Hase yeeshee siba si ayay dhaantaa oo isbeddel weyn ayaan hadda dareemeynaa laakiin waxaana jeclaan lahayn mid ka fiican xaalku sida uu yahay hadda.
BECO ayaa adeegsata matooro ku shaqeeya shiidaal, kuwaasoo caalamka intiisa badan laga gudbay. Taas ayayna maamulka u sababeeyeen in ay keeneyso sicirka sarreeya. Balse waxa ay sheegeen in ay haatan ku taamayaan in ay mar dhow dhisaan Warshad casri ah oo dabka laga dhaliyo (Power Plant) sidoo kale waxay ka faa’iideysan doonaan ileyska qorraxda iyo dabeysha iyo qaabab kale oo ka casrisan loogana kaaftoomi doono mashiinnada hadda la isticmaalo, waxaana dhawaan aruurin doonnaa Matoorrada qaylada badan in-shaa Allaah.
Midowga shirkadaha korontada ayaa keenay in shaqo abuuris loo sameeyay in ka badan 1200 oo shaqaale ah oo isugu jira injineerro koronto, farsamayaqaanno, Xisaabiyeyaal, shaqaale hoose iyo maamul intaba. Waxa ayna higsanayaan in la helo shaqaale tayo iyo aqoon durugsan leh oo ay dibadda iyo gudaha dalkaba ka keenaan sida dalalka Turkiya, Ingiriiska, Shiinaha, Baakistaan iyo Hindiya.
Mar aan waydiinnay cidda maalgelisay ayaa waxa ay noo sheegeen in lacagta lagu maalgeliyay BECO ay ka timid 100% shakhsiyaad iyo ganacsato Soomaali ah, balse ay rajeynayaan inay mustaqbalka albaabbada u furaan ciddii dooneysa inay maalgashato Soomaali iyo ajnabiba, waa haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka maalgashi ee shareecada waafaqsan oo saldhig u ah hannaanka maamul dhaqaale ee shirkadda.
Arrinta lagu tayeynayo korontada ay bixiso shirkadda BECO ayaa waxa ay noqon doonta horumar baaxad weyn leh oo kusoo kordhay Soomaaliya oo dhan, iyada oo la filan karo in ay gobollada dalka ay ka hirgeli doonto sida ay horeba shirkadaha telefoonnada ugu faafeen gobollada, aadna loogu diirsaday.
Maxaa u Sabab ah Kororka Qiimaha Korontada?
Mid ka mid ah khubarada ku xeeldheer Korontada ayaa Xaqiiqa Times u sheegay in dadka ay ka cabanayaan qiimaha korontada oo sare u kacay, laakiin waxa aysan ogayn in qoysaska laftooda ay kordhiyeen isticmaalka korontada. Waagii hore dadku waxa ay istcimaali jireen oo kaliya nalal yaryar oo ay qolalka ku iftiinsan jireen. Hase yeeshee waxaa haatan kordhay isticmaalkoodii. Sababtoo ah inta badan waxaa guryaha lasoo dhigtay telefishinno, qaboojiyeyaal, marwaxado, mukeyfyo, mashiinnada dharka lagu dhaqdo iyo telefoonno u baahan in dab joogto ah ay helaan. Intaas oo dhan waxa ay isticmaalayaan koronto xad-dhaaf ah oo keeneysa in sida biilka reerka ay ula siyaasaddo tirada dadka ay korontaduna la kordhayso isticmaalka.
Khubarrada korontada ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay arrintan tahay tallaabo weyn oo guul ah oo Soomaalida u soo hoyatay haddii dadaalka shirkadaha gaarka ah ay dowladda qayb ka noqoto waxaa la rajeynayaa in ay guushu noqon doonto miro-dhal, oo ay dalkuna ka hana qaadi karaan warshado wax soo-saar leh oo haatan ku dhiirran la’ koronto-xumada guud ahaan dalka ka jirta.
Sidoo kale, waxaa dhici karta in la helo baabuur iyo tareenno u kala goosha dalka haddii koronto awood leh misana jaban la helo sida ay ku hamineyso shirkada korontada ee BECO oo haatan ku howlan haqab tirka koronto la isku halleyn karo oo xoog leh.
Previous articleCabdikariim Xuseen Guuleed oo u Tartamaya Hoggaanka Gobollada Dhexe
Next articleCaddadka 13-aad ee Xaqiiqa Times